UMnu Mzomuhle Mjwara umiswe ngoMsombuluko ngemuva kokuba abazali bezingane ezifunda kulesi sikole bevuke umbhejazana bavala amasango esikole ngoba bekhala ngokuthi bafuna izimpendulo ngezimali zesikole ezikhokhwa abafundi. Baphinde bakhala nangokuthi kunezifundo ezimbili, okuyiLife Skills kanye neNatural Sciences ezingafundwa kodwa uthishanhloko uzifakela amamaki izingane zingazange zifundiswe lutho.
Izindaba zokumiswa kwakhe zidalulwe umhloli uMnu Mncwabe nobekade ekhona kulesi sikole ngoMsombuluko ukuzozama ukudambisa ulaka lwabazali.
Nakuba engazange akudalule ukuthi kungani uMnu Mjwara ephenywa, uthe lokhu kumayelana nezinkinga ezikhona ngaphakathi esikoleni.
Kuphazamisekile ukufunda kulesi sikole ngoMsombuluko njengoba abafundi bebuyiselwa emuva kanti othisha nabo bebevaleleke ngaphandle.
I-Echo ithole ngomthombo wayo othembekile ukuthi umsindo usuke ngoMgqibelo ngesikhathi uMnu Mjwara engafiki emhlanganweni wabazali obubizwe yisigungu esengamele isikole (School Governing Body).
Inhloso yalo mhlangano kuthiwa bekungukuthi uthishanhloko azoziphendulela ukuthi kungani abazali bekhokhiswa imali yesikole ekubeni isikole sesiphasiswe njengesikole okungamele ukuba izingane zikhokhiswe kusona imali yekufunda.
Ngokusho komunye umzali obekhona emhlanganweni, uthe uthishomkhulu akazange afike kanti baze bathola kamuva ukuthi ngoLwesihlanu wabhala izincwadi wathi umhlangano awusekho ngaphandle kokwazisa isigungu esengamele isikole.
“Into ebesiyifuna thina ukuthi azoziphendulela nje kuphela.
“Besingazi nanokuthi isikole akusakhokhwa kusona. Size sathola kamuva nje ngoba naku isigungu esengamele isikole sesihambe sayobuza emahhovisini omnyango ukuthi kungabe kuhamba kanjani ngesicelo sokuthi kulesi sikole kufundwe mahhala.
“Bafike batshelwa ukuthi isikole saphasiswa ngenyanga kaMbasa (April) kodwa loko thina besingakwazi kanti nesigungu besingazi. Kunabazali la abebekhokha imali yesikole ngoNhlaba (May) kanye nangoNhlangulana (June) leyo mali futhi ibithathwa esikoleni.
“Sifuna ukwazi ukuthi leyo mali iyaphi ngoba phela akusakhokhwa esikoleni,” kubeka yena.
Abazali abebevutha bhe bathe bafuna ukwazi ukuthi kungani uMnu Mjwara ekhokhisa izingane imali yesikole engu-R160 umfundi ngamunye ekubeni isikole sesiphasiswe njengesikole okungakhokhwa kuso.
Abanye bazali abakhulume ne-Echo baveze ukuthi lo mhlangano wokuzama ukuxazulula izinkinga kulesi sikole bekungasikona okokuqala wenzeka njengoba esikhathini esingangenyanga esedlule kwaba khona omunye umhlangano kodwa wangaba yimpumelelo ngenxa yokuthi kwagcina kungaphunywanga nezixazululo.
“Ukube isigungu esimele abazali asikaze siye ukuyobuza ukuthi emahhovisi oMnyango wezeMfundo ziyobuza ukuthi kuhamba kanjani ngesicelo sabo sokuthi isikole singakhokhisi imali. Bafike batshelwa ukuthi leso sicelo kade saphasiswa incwadi yathunyelwa esikoleni kodwa uthishanhloko akazange ayiveze leyoncwadi.
“Incwadi leyo kuthiwa yaphasiswa ngenhanga kaNdasa (April) kodwa kukhona abazali abakhokha ngemuva kwaloko imali yathathwa esikoleni. Sifuna ukwazi ukuthi leyomali ishonaphi nokuthi kungani singaziswanga singabazali. Sikhathele ilothishomkhulu ozenzela umathanda lapha esikoleni. Akukakapheli ngisho iminyaka emithathu efikile kulesi sikole kodwa usezenzela umathanda. Uqhosha ngokuthi yena angeke aze ezwe abazali isikole esakhe,” kusho omunye wabazali.
Laba bazali bathe abasafuni kuzwa lutho kodwa sebefuna ukuthi kufike uNgqongqoshe wezemfundo uMnu Kwazi Mshengu azoxoxisana nabo mayelana nalezi zinkinga ababhekene nazo.
Usihlalo wesigungu esimele abazali uMnu Mabhungu Mkhize ukuqinisekisile ukuthi vele zikhona izinkinga kulesi sikole okubalwa kuzona ukungabikhona kothisha kodwa abafundi banikezwa amamaki okungaziwa ukuthi avelaphi.
Uthe lezi zinkinga bayazibika eMnyangweni wezeMfundo kodwa akukho okwenzekayo.
Imizamo yokuthola okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnu Muzi Mahlambi ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa kanti nemiqhafazo athunyelelwe yona akayiphendulanga.